Degdeg:- Coll caare oo ujawaabay gudoomiyaha Sanaag “Waa balan inaan gurigiisa ugu galo”.
June 11, 2019 Xafiiska Puntland Somalia, Wararka Maanta 3
Generaal Saciid Cawil Jaamac Caare wuxuu wacad ku maray in uu gudoomiyaha Gobolka Sanaag uu gurigiisa ugu gali doono marka dhulku qalalo, sidoo kalena wuxuu beeniyay war kasoo baxay isla gudoomiyaha Gobolka Sanaag oo ahaa in uu dalka ka dhoofayo, Caare wuxuu sheegay in uusan meelna dhulkiisa ugu socon.
Generaal Caare ayaan waydiiyay waxa uu xal u arko ” Waxaan xal u arkaa in Biixi iyo Kaahin xilka laga qaado” sidoo kale waxaan waydiiy in hadii Madaxweyne Biixi iyo Kaahin ay ka codsadaan in miiska korkiisa ay kuwada hadlaan waxa uu ka qabo ” waxaan la hadlayaa marka 8dii qodob ee gacan libaax ay suurta geliyaan ”
Caaroow Hawshii aanu kuu dirnay wali kamaad soo bixine maxaanu maxkamad saarnaa Kaahin & Biixi…markaad hawshii qabato aanu kuu dirnay uun baanu iyagana maxmakada latiigsanaynaa.
Biixii & Kaahin baad ka cabanaysaa soow mahaa…hawshii lagusoo igmaday dhamee!
Shiine Culaybaaa Quustay!!
aedn yuusuf says:
caare maanta wuxuu labistay astaantii x.d.s maka tanaasulay fikirkii soomaali diidka ahaa ee ay qabaan sooamaalida w,galbeed dadka ku nool qaarkood